Global Voices teny Malagasy » Taiwan: Adihevitra Momba Ny Volavolan-Dalàna Ataon’ny NCC · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Marsa 2018 3:28 GMT 1	 · Mpanoratra I-fan Lin Nandika Nancy
Sokajy: Taiwan (ROC), Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Notanterahan'ny Komity Nasionaly momba ny Serasera tany Taiwan tamin'ny faha 20 Septambra 2007 ny fivoriany faharoa, mba hiadiana hevitra momba ilay volavolan-dalàna vaovao faharoa momba ny serasera. Hampidirana ireto lalàna telon'ny serasera ireto — ny lalàna momba ny zanabolana sy ny fampielezana sary sy feo, ny lalàna momba ny onjam-peo sy ny fahitalavitra mandeha amin'ny hosona ary ny lalàna momba ny fampielezana sary feo ary ny fahitalavitra io lalàna vaovao io.
Avy amin'ny Newstory  :
Misy fomba fijery telo ny momba ny fampiroboroboana ny sehatry ny fifandraisandavitra sy ny haino aman-jery taorian'ny taona 1980 : fifanojòna, fanatontoloana ary ny fanesorana ny fepetra. Mifototra amin'ny saina no namoronan'ny NCC io lalàna vaovao momba ny serasera io.
Amin'ny lafiny iray, matahotra ny NCCwatch , vondrona olon-tsotra, fa handrisika ny fanaovana ampihimamba ny haino aman-jery ity fironana ity. Satria heverina fa ny haino aman-jery no mivohy ny kolontsaina, dia tsy maintsy dinihanay ny votoatiny. Araka izany, taorian'ilay fivoriana faharoa, dia nohamafisin'ny NCCwatch  fa misy olana goavana amin'io volavolan-dalàna faharoa io :
(1)Toherinay ny fanafoanana ny hetra manokana (ho an'ny governemanta) alaina amin'ny mpandraharaha amin'ny haino aman-jery.[…] Raha tsy misy ny hetra manokana (1%-n'ny vola matin'ireo mpandraharaha amin'ny haino aman-jery), dia tsy manana andraikitra amin'ny sosialy intsony ny mpandraharaha amin'ny haino aman-jery. […]
(2)Toherinay ny famelàna ireo mpampiasa vola avy any ivelany hanana taha ambony (49%) amin'ny petrabola any anatin'ireo orinasanà fandefasana fahitalavitra eto amin'ny firenena.[…] Tsy hanome tombontsoa ny sehatry ny haino aman-jery eto an-toerana sy ny asantsika ity lalàna ity, sady hanimba ny kolotsaintsika sy ny maha-isika antsika izany.[…]
(3)Toherinay ny fanafoanana ny fepetra izay mandrara ny fitantanana karazana orinasa haino aman-jery samihafa. […] Handrisika ny fampivangongoana ny fanànan'ny haino aman-jery io lalàna io no sady hampihombo ny ampihimamba amin'ny sehatry ny haino aman-jery.[…]
(4)Toherinay ny fampihenana be tsy misy toa azy ny sazy ho an'ireo mpandraharaha amin'ny haino aman-jery nandika lalàna. […] Tsy afaka hiaro ny mpanjifa amin'ny hetraketraka ataon'ny haino aman-jery ambany kalitao io lalàna io.[…]
(5)Toherinay ny fanafoanana ny fitsipika izay mamaritra ny ampahany marina amin'ny fandefasana fandaharana tokony ho vokarina eto an-toerana. […]
Noresahan'ny Newstory  ihany koa ny momba ny sasantsasany amin'ireo andininy mampiahiahy ao amin'ilay volavolan-dalàna vaovao faharoa, izay azo fintinina amin'ireto teboka telo ireto :
Tsy misy dikany ny andininy hoe ‘ ireo votoaty sy dokambarotra atolotry ny orinasa mpampiely dia tsy tokony handrisika ny fifanolanana eo amin'ny vondrona etika’ raha tsy faritantsika ny hoe ‘fandrisihana ny fifanolanana eo amin'ny vondrona etika.’
Ny fitsipika mifehy ny faharetan'ny dokambarotra amin'izao fotoana izao dia latsaky ny 1/6 isaky ny fandaharana, […] nefa novaina ho latsaky ny 1/6-n'ny fotoana manontolon'ny fandaharana rehetra alefa .
Ao anatin'ilay volavolan-dalàna, ny fandefasam-baovao sy ny fandaharana ho an'ny ankizy ihany no tsy azo andefasana dokambarotra, saingy azo aseho amin'ny efijery (écran) ny ‘dokambarotra’ sy ny ‘mpanohana’.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/18/115641/